Sony 5.1 Channel Blu-ray Disc Home Theatre System BDV-E3100 | Buy online | SHOP.COM.MM
Sony 5.1 Channel Blu-ray Disc Home Theatre System BDV-E3100
Home theater လည်းလိုချင်တယ် Blu ray စက်လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာရှာတော. ဒီဟာလေးတွေ့တယ်
ကောင်းပါတယ် ၇ုပ်ထွက်ကော အသံကော
ဈေးလည်းသင့်တယ် Read more Hide
Amazing product!! Awesome bass. Different surround effects gives you the feel ofatheatre. Afterall it'saSONY!!! Read more Hide
Oo Min Naing
အရမ်းမိုက်တဲ့ Home Theatre system ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရုပ်ရှင်ထဲရောက်နေသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ မီးလေးမှောင်မှောင်ထဲ အသံအားကောင်းကောင်း ရုပ်ထွက်ကြည်ကြည်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ feeling ဘာနဲ့မှလဲမရဘူး Read more Hide
Sony Blu-ray Home Theatre System က အားလုံးအစုံအလင် ပါဝင်တဲ့အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ Read more Hide
Front Speaker Size 90 x 205 x 91 mm
5.1 Channel Blu-ray Disc Home Theatre System BDV-E3100
Specifications of 5.1 Channel Blu-ray Disc Home Theatre System BDV-E3100